Zim stares at another war in Mozambique - The Zimbabwe Independent
HomeEditor`s PickZim stares at another war in Mozambique
Zim stares at another war in Mozambique
Dyck’s private security company, Dyke Advisory Group, was hired by Mozambique to assist.Presidential spokesperson George Charamba, who accompanied Mnangagwa to Mozambique, confirmed the army was on high alert although he dismissed reports that special forces had been secretly deployed in Mozambique.
Charamba said some Zimbabwean haulage trucks have been attacked in recent weeks.“It was important that we discussed two specific security issues. Firstly, there is the issue of Renamo dissidents operating in Manica province as well as in the central regions. The greatest traffic on that trade route is Zimbabwean and some of our trucks have been attacked there. So it is a very strategic trade route which links Zimbabwe to the rest of the world. They thus pose a direct threat to Zimbabwe,” Charamba said.
Previous articleHow “Forex Trading from Home” became the biggest winner of the Covid-19 Crisis
Next articleMDC-Alliance fumes at Zanu PF’s ‘revenge tactics’